ဒီဂီယာ အပါအဝင် ယူနိုက်တက် ကစားသမား တွေရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်တွေ အပေါ် အကြီးအကျယ် ပေါက်ကွဲ သွားတဲ့ အာဆင်နယ် တိုက်စစ်မှူးဟောင်း - SPORTS MYANMAR
ဒီဂီယာ အပါအဝင် ယူနိုက်တက် ကစားသမား တွေရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်တွေ အပေါ် အကြီးအကျယ် ပေါက်ကွဲ သွားတဲ့ အာဆင်နယ် တိုက်စစ်မှူးဟောင်း
ဆဲလ်တစ် နဲ့ အာဆင်နယ် အသင်း တို့ရဲ့ တိုက်စစ်မှူး ဟောင်း ဖြစ်သူ ချာလီ နစ်ကိုးလ် ကတော့ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်း ရဲ့ ခံစစ် ဟာ ချောက်ချား စရာ ကောင်းတဲ့ အကြောင်း ၊ ဂိုးသမား ဖြစ်သူ ဒေးဗစ် ဒီဂီယာ ဟာ ထိပ်တန်း ဂိုးသမား မဟုတ်တဲ့ အကြောင်း ဝေဖန် ထိုးနှက် သွားခဲ့ လိုက် ပါတယ် ။
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်း ဟာ ဒီနေ့ ညမှာ အက်စတွန် ဗီလာ အသင်း နဲ့ ရင်ဆိုင် ကစား ရမှာ ဖြစ်ပြီး အဆိုပါ ပွဲစဉ် မတိုင်မီ ချာလီ နစ်ကိုးလ် က ယူနိုက်တက် စီနီယာ ကစားသမားတွေ ဖြစ်ကြတဲ့ ဒီဂီယာ အပါအဝင် အက်ရှ်လေ ယန်း တို့ကို ပါ ဝေဖန် ထိုးနှက် သွားခဲ့ တာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
အထူးသဖြင့် အသက် 34 နှစ်တောင် ရှိပြီ ဖြစ်တဲ့ အက်ရှ်လေ ယန်းကို ဘာကြောင့် စာချုပ် သက်တမ်း တိုးမြှင့်တာ လဲ ၊ အသင်း ရဲ့ လမ်းကြောင်း က ဘာလဲ ဆိုတဲ့ အပေါ် ချာလီ နစ်ကိုးလ် က ဝေဖန် ထိုးနှက် ခဲ့တာ ပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
” ယူနိုက်တက် အသင်း ရဲ့ ခံစစ် ပိုင်းက တစ်ကယ့် ကို ရှော့ခ် ရစရာ ပါပဲ ။ ဒီဂီယာ အကြောင်း ကို ဘယ်သူ မှ မပြော ကြတော့ ပါဘူး ။ သူဟာ အမှား တွေကို မလုပ်တော့ ပါဘူး ။ ဒါပေမယ့် ဂိုးပေါက် ကာကွယ် မှု တွေကို လည်း မလုပ်ဆောင် တော့ ပါဘူး ။ ဒါဟာ သူ့ရဲ့ အမှတ် လက္ခဏာ တွေလေ ”
” သူဟာ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်း အတွက် တစ်နှစ်တာ အကောင်းဆုံး ကစားသမား ဆုကို အကြိမ် များစွာ ရယူ ဆွတ်ခူး ထားနိုင် ခဲ့ ပါတယ် ။ အထူးသဖြင့် အဲ့တာ တွေကို လူးဝစ် ဗန်ဟားလ် နဲ့ ဟိုဆေး မော်ရင်ဟို လက်အောက် တွေမှာ ရယူနိုင် ခဲ့တာပါ ”
” ဒါပေမယ့် ဘယ်သူမှ သူ့ကို ထိပ်တန်း ကစားသမား တစ်ယောက် ဆိုပြီး အထူး ချီးကျူး ပြောဆိုခြင်း မရှိ ကြတော့ ပါဘူး ။ အက်ရှ်လေ ယန်းကို ကြည့်လိုက်မယ် ဆိုရင် သူဟာ ဘယ် ခံစစ် သာမက ညာ ခံစစ် ပါ ကောင်းကောင်း မကစား တက်တဲ့ ကစားသမား ဆိုတာ တွေ့မြင် ခဲ့ရ ပါတယ် ။ ဒါဆို သူ့ကို ဘာလို့ စာချုပ် သက်တမ်း တိုးခဲ့ ကြတာလဲ ? ”
” တစ်ကယ် ပြောတာ ပါ ။ ယူနိုက်တက် ရေ ၊ မင်း ဘယ်ကို သွား နေတာ လဲ ? ဘရန်ဒန် ဝီလီယံ နဲ့ မာဆွန် ဂရင်းဝုဒ် တို့ ကောင်းမွန် ခဲ့ကြ ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် သူတို့ တွေက အသင်း ကို ဆွဲတင် ပေးနိုင် မယ့် သူတွေ လား ? ၊ မားကပ်စ် ရပ်ရှ်ဖို့ ကရော အဲ့တာ တွေကို လုပ်ဆောင် နိုင်ပါ့ မလား ? ”
” ကျွန်တော် တို့ တွေဟာ ဘောလုံး မှာ 10 မိနစ် လောက် ကောင်းကောင်း ကစား ပြရုံ နဲ့ ရပ်တည် ပြလို့ မရနိုင် ပါဘူး ။ သူတို့ တွေက မပြောင်းလဲ ချင်ကြ ပါဘူး ။ သူတို့ တွေဟာ အသင်းကို ဒီ အတိုင်းပဲ ဆက်လက် တည်ဆောက် ချင်နေ ကြတာပါ ” လို့ ချာလီ နစ်ကုုိးလ် က ယူနိုက်တက် အသင်း ရဲ့ လက်ရှိ အနေအထား အပေါ် ဝေဖန် ထိုးနှက် သွားခဲ့ လိုက် ပါတယ် ။